Let's Go and Walk to Our Brighten Future.: သတင်းထောက် အိမ့်ခိုင်ဦးကို ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် ချမှတ်
သတင်းထောက် အိမ့်ခိုင်ဦးကို ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် ချမှတ်
သောကြာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 14 2008 16:30 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ လှုပ်ရှားတက်ကြွသူများအား စဉ်ဆက်မပြတ် ပြစ်ဒဏ်စီရင်ချက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် နာဂစ်လေဘေး ဒုက္ခသည်အရေး လိုက်လံသတင်းယူခဲ့သူ Ecovision ဂျာနယ် သတင်းထောက် မအိမ့်ခိုင်ဦးအား တာမွေတရားရုံး၌ ယနေ့ ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်ချလိုက်သည်။
အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် မအိမ့်ခိုင်ဦးအား တာမွေမြို့နယ် တရားရုံးက လူထုကို ဆူပူစေရန် လှုံ့ဆော်မှု ပုဒ်မ ၅ဝ၅ (ခ) ဖြင့် တရားစွဲဆိုထားရာမှ တရားဆိုင်ဘက်မှ ရှေ့နေ တက်ရောက်ခွင့် မရှိသော တရားခွင်တွင် စီရင်ချက် ချလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
"ဒီနေ့ နေ့လယ်မှာ ၂ နှစ် အမိန့်ချလိုက်တယ်။ သူ့ကို အမှုလိုက်တဲ့ ရှေ့နေ့ ဦးမောင်မောင်ဝင်းက လိုက်တယ်။ ဒီနေ့ အမှုလိုက် ရှေ့နေတယောက်မှ မရှိဘဲ တရားသူကြီး ဒေါ်သန်းသန်းကနေ အမှုကို စီရင်လိုက်တာ။ သူတို့ကို ထောင်ကို ပြန်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာ မိသားစုတွေနဲ့ တွေ့ခွင့်ရတယ်" ဟု လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တဦးက ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လ ၁ဝ ရက်နေ့တွင် တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ လေဘေးဒုက္ခသည် ၃ဝ ခန့်က ရန်ကုန်ရှိ နိုင်ငံတကာမှ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့ (အန်ဂျီအို) များထံ သွားရောက်၍ အကူအညီ တောင်းခံရာတွင် မအိမ့်ခိုင်ဦးက သတင်းလိုက်ယူရင်း တာမွေမြို့နယ် နတ်မောက်လမ်းရှိ ယူအန်ဒီပီ ရုံးရှေ့တွင် အဖော်ဖြစ်သူ ကိုကျော်ကျော်သန့်နှင့်အတူ အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။
ကိုကျော်ကျော်သန့်က ဆူပူအောင် လှုံ့ဆော်မှုအပြင် နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ တရားမ၀င် သွားလာမှု ပုဒ်မ ၁၃ (က) ဖြင့် ၅ နှစ်ပါ ထည့်ပေါင်း၍ စုစုပေါင်း ၇ နှစ် ကျခံခဲ့ရသည်။
မအိမ့်ခိုင်ဦးသည် ရန်ကုန်အခြေစိုက် အပတ်စဉ်ထုတ် Ecovision ဂျာနယ်တွင် သတင်းထောက်အလုပ်ကို လုပ်ခဲ့သည်မှာ ၂ လခန့်သာ ရှိသေးသည်။
Posted by yahutha at 3:12 AM
၉၃ နှစ်ပြည့် အမေလူထုဒေါ်အမာမွေးနေ့အမှတ်တရ ဂုဏ်ပြုအယ...
အင်တာနက် အသုံးပြုသူများ လုံခြုံမှုအတွက် စိုးရိမ်
HRDB ဦးမြင့်အေးနဲ့ အဖွဲ့ဝင် တချို့ ထောင်ဒဏ် တသက်ခ...
ထိုင်းနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ အကြီးအကဲကို ထိုင်း ၀န်ကြီး...
မေ ၃၀ ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှု ကြီး (၆၆)လ ပြည့်် ၀မ်းနည...
မျိုးဆက်သစ်လူငယ်နှစ်ဦး ထောင်ဒဏ် ၈ နှစ် ချမှတ်ခံရ
အစိုးရ နုတ်ထွက်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပဖို့ ထိုင်း...
နောက်ထပ် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၇ ဦး နယ်ဝေးထောင်မျာ...
တပ်တွင်း အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်
သာသနာဥသျှောင်အဖွဲ့ ၏ နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း...
နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်အပြစ်ပေးမှု သာသနာ့ဥသျှောင်အဖွဲ့ ရှုတ...
အမိန့်မချခင် 10 မိနစ်အလို၌ရေးသားထားသော ဇေယျာသော် န...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၀ ကျော်အရောက်အပေါက် ခက်ခဲလှတဲ...
မြန်မာစစ်သား (၆) ဦး ကေအန်ယူထံ လက်နက်ချ
88 ကြိမ်မြောက် အမျိုးသားနေ့ အထိမ်းအမှတ် in fort wa...
ထမင်းစားပြီး ရှောင်သင့်သော ၇ ချက်
(၈၈) နှစ်မြောက် အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ 
ကျောင်းသားလူငယ်ခေါင်းဆောင်များကို သာမက ၎င်းတို့၏ မိသာ...
မီဒီယာသမားများကို ထောင်ဒဏ်ချမှတ်မှု မြန်မာသတင်းသမဂ္ဂ...
Free Burma Federation- E Newsletter (Nov)
အသျှင်ဂမ္ဘီရကို စုစုပေါင်း ထောင်ဒဏ် (၆၈) နှစ် စွယ်စ...
အမေရိကန်ကြီးစိုးသည့်ခေတ် ကုန်တော့မည် နောင်အနှစ် (၂...
Listening Post - Media freedoms - Nov 14 - Part 1
Live Type (Myanmar)
20 November 2008 - Part 2
20 November 2008 - Part 1
ဇာဂနာ ထောင်ဒဏ် ၄၅ နှစ် ချမှတ်ခံရ
၁၉၈၈-၂၀၀၂ မြန်မာ့နိုင်ငံ ရေးဖြစ်စဉ် ထူးခြားမှု ရက်စ...
ဗမာ့ကြယ်ကွန်ယက်သတင်းလွှာ အမှတ် (၆)
Voice of Burma စာစောင် အတွဲ 684
နောက်ထပ် GW အဖွဲ့ဝင် ၅ ဦး ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်စီချမှတ်...
ဗကသ ခေါင်းဆောင် ဒီငြိမ်းလင်းကို ၆ နှစ်ခွဲ ထောင်ဒဏ်...
စာရေးဆရာမ နှင်းပန်းအိမ် ထိုင်းနယ်စပ်သို့ တိမ်းရှော...
အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ ကုလအစီရင်ခံစ...
ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ် မြန်မာနိုင်ငံသွားဖို့ တိုက်တွ...
နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်နဲ့ ဥပဒေမဲ့ တရားစီရင်မှုအပေါ် ကုလသမဂ...
Than Shwe and Kyaing Kyaing.wmv
ဗမာပြည်မှ အာဇာနည်များ ( သို့) ပြည်သူ့ အလင်းဆောင်...
8888 People Power01
မကောင်းသတင်းများဖြင့် နာမည်ကျော်ကြား လူကြောက် ...
ကိုမင်းကိုနိုင် အပါအ၀င် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင...
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဟောင်း တက်ဆင် ဘယ်ရောက်နေလဲ
ဟယ်လာရီကလင်တန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဖြစ်နိုင်ဖွယ်...
ဂီတ ရန်ပုံငွေ in Japan (b)
ဂီတ ရန်ပုံငွေ in Japan (a)
အရှင်ဂမ္ဘီရ - ရွှေဝါနဲ့ ရွှေမြန်မာကို အလှဆင်စေခဲ့သူ
သတင်းထောက် အိမ့်ခိုင်ဦးကို ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် ချမှတ်...
WEI Hsueh Kang United Wa State Army Financial Net...
‘၀’ ဘိန်းဘုရင်တွေနဲ့ စီးပွားရေးမလုပ်ဖို့ အမေရိကန် ...
Voice of Burma.
သံဃာ့အရေးအခင်းနောက်ပိုင်း လူငယ်များ ဘာသာရေးကို အာရ...
နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကို နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်...
အမေရိကန်သမ္မတဘုရ်ှက မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်...
မစုစုနွေးကို ထောင်ဒဏ် (၁၂) နှစ်ကျော်ချ
တရားရေးစနစ်ကို အသုံးချပြီး အတိုက်အခံတွေကို ဖိနှိပ်...
MPU သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ၊
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များကို ထောင် ၆၅ နစ်ချမှတ်
နအဖရဲ့ ဝိသမလောဘသား စားဖားများ (Sanction List)
ဘာသာရေးပွဲများကို အာဏာပိုင်များ ပိုမို တင်းကျပ်လာ
လူငယ် ဘလော့ဂါ နေဘုန်းလတ်နှင့် ကဗျာဆရာ စောဝေတို့ကို...
မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့များ စစ်ဆေးနေသည့် ကင်ကျုံအီး...
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးနဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေ...
သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်နှင့် စစ်အာဏာရှင်ကိုဆန်ု ...
ကြေကွဲဝမ်းနည်း ပါသည် ရဲဘော်နုနုအေး
နျူစွမ်းအင်သုံး ရုရှားရေငုပ်သင်္ဘော မတော်တဆ ထိခိုက်မ...
အငြင်းပွားနေတဲ့ ရေပိုင်နက်မှာ ရေနံရှာဖွေရေး စစ်အစု...
Underwear from around the world is takingastand ...
5th November 2008 - Part 2
5th November 2008 - Part 1
နိုင်ငံရေးအမှုလိုက်ရင်း ရှေ့နေက တရားခံဖြစ် အန်အယ်ဒ...
အငြင်းပွား ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် ရေပိုင်နက်မှာ ရေနံဆက်ရ...
NDD Monthly Chronology October - 08
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရဲ့ ပထမဆုံး လူမဲ သမ္မတ ဘာရက် အ...
နိူင်ငံရေးအကျဉ်းသားများစာရင်း (အောက်တိုဘာ ၂၀၀၈)
သမိုင်းတွင်မယ့် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက် အမေရိကန်နိုင...
မြန်မာနှင့်အငြင်းပွားသည့် ရေပိုင်နက်သို့ ဘင်္ဂလားဒက်...
ကြွေ သွားတဲ့ ကိုမျိုးအောင်သန့် အား... ကြွေနေတဲ့ကြ...
ပန်းတပွင့် ကြွေ သွားပြန်ပြီ။
20th Anniversary of All Burma Students Democratic ...
Voice of Burma Issue No. 682 NOVEMBER 2, 2008
နာဂစ် ၆ လအလွန် မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်သူတွေရဲ့ ဘ၀ နာလံ ...